Paxful, Inc. (nke a na-akpọkwa "Paxful," "anyị," "anyị," maọbụ "nke anyị") na-eme ihe iji melite ngwaahịa anyị ma nye ndị ahịa nchekwa. N'ime Iwu Bug Bounty ("Iwu"), anyị na-akọwa okwu ndị metụtara maka Mmemme Bug Bounty anyị ya na etu esi eji ya na webụsaịt anyị na https://paxful.com/, gụnyere, ma enweghi oke, n'obereakpaego Paxful, ịzụ Bitcoin na platfọm ntaneeti, ngwa mkpanaaka, ibe mgbasa ozi, maọbụ ihe ndị ọzọ dị n'ịntaneetị (n'otu, "webụsaịt"), ma ọ mgbe ị jiri ngwaahịa, ọrụ, ọdịnaya, atụmatụ, teknụzụ, maọbụ ọrụ ọbụla anyị na-enye (mkpokọta, "Ọrụ") ahụ. Ezubere Iwu a iji nyere gị aka inweta ozi gbasara etu ị ga-esi sonye na Mmemme Bug Bounty anyị, nke na-enyocha echedoro, ya na uru ị ga-enweta. Biko rịba ama na onyinye Ọrụ anyị nwere ike ịdị iche site na mpaghara na mpaghara.
Maka nzube nile, udi nke asụsụ Bekee nke iwu bug bounty a ga-abụ nke ezi, ngwa nchịkwa. Enwee ka esi nwee ogbatauhie n'udi asụsụ Bekee a na asụsụ ọzọ atụgharịrị ya, nke Asụsụ bekee ga-ewere isi ma chịkwaa.
Gịnị bụ Mmemme Bug Bounty?
Iji meziwanye Paxful na Ọrụ ndị ahụ, Mmemme Bug Bounty Paxful na-enye ndị ọrụ anyị ohere inweta ụgwọ ọrụ maka ịmata nsogbu ọrụaka.
Kedụ ka ị ga - esi kọọrọ anyị nsogbu Mmemme Bug Bounty?
Ekwesịrị ka ebuga nkwukọrịta niile ga na [email protected] Na ntinye gị biko kọwaa nkọwapụta nke ngwangwa na ihe akaebe doro anya na enweghị nsogbu dị na ya (nkọwa / nzọụkwụ iji megharịa / nseta ihuenyo / vidiyo / ederede maọbụ ihe ndị ọzọ).
Imebi iwu ọbụla n'ime iwu ndị a nwere ike ime ka mmadụ ghara itozu n'ịnata ihe ọma.
Nwalee nke ọma naanị megide akaụntụ nke i nwere maọbụ akaụntụ nke ị nwere nkwenye n'aka onye na-ejide akaụntụ iji nwalee ya.
Ejila nnyocha iji mebie/wepu datà maọbụ dị mkpa na sistemụ ndị ọzọ. Jiri ihe akaebe nke echiche gosipụta naanị nghọtahie.
Ọ bụrụ na ozi ewetere gị dịka ozi nkeonwe, nzere, dgz.. ka a na-enyochadịka akụkụ ohere, agaghị echebe, echekwa, bufee,-nweta, maọbụ n'ụzọ esichara mee ya mgbe mbụ achọpụtara.
Ndi oru nchọcha agaghị enwe ike, ma ha enweghi ikike ime ihe obula nke ha ga-emebi, mmebi maobu mebie ihe Paxful.
Ndị na-eme nchọpụta nwere ike ghara igosipụta adịghị ike n’ihu ọha (na -ekesa onye ọbụla na-abụghị ndị ọrụ Paxful nyere ikike ịkọwapụta nkọwa ọbụla ), maọbụ soro ndị ọzọ kerịta nsogbu ahụ, n’enweghị ikike Paxful.
Kedụ ka anyị ga-esi enyocha ihe amatara n'okpuru Mmemme Ntuziaka Bug Bounty?
A na-enyocha ihe nchoputa niile site na iji usoro ihe egwu dị na ya.
Nkwekọrịta nke Ekpupeghị
Tupu anyị amalite ikparịta nkọwa ọbụla metụtara nsogbu ndị enwetara na ị matala n'okpuru Mmemme Ntuziaka Bug Bounty, gụnyere ịkwụ ụgwọ, wdg., a ga-achọ ka anyị na gị banye na Nkwekọrịta na-enweghị ngosi.
Kedụ ka anyị ga-esi akwụ ụgwọ ụgwọ mmemme Bug Bounty?
Paxful na-akwụ ụdị ụgwọ a. E nwere ike ịkwụ ụgwọ ọrụ niile naanị ma ọbụrụ na ha anaghị emegide iwu na ụkpụrụ dị adị, gụnyere mana enweghi oke na mmachi azụmaahịa na mmachi akụnaụba.
Oge ole ka ọ ga-ewe anyị iji nyochaa ihe Nchọpụta Bug Bounty gị?
N'ihi ọdịiche dị iche iche na nke mgbagwoju anya nke nsogbu teknụzụ, anyị edobeghi usoro oge maka inyocha ihe nnyocha n'okpuru Mmemme Bug Bouny. Nnyocha anyị ga-agwụcha naanị mgbe anyị gosipụtara ịdị maọbụ enweghi ike.
Kedụ ikpe ndị ewepụrụ na Mmemme Bug Bounty?
A na-ahụta ụfọdụ adịghị ike dị ka ihe na-ezughi oke maka Mmemme Bug Bounty. Ihe ọghọm ndị ahụ na-agụnye, mana enweghi oke na:
Mkpughe na-achọ nnyocha mmadụ na ibe ya;
Nsogbu echiche na-enweghi mmetụta ọbụla bara uru;
Oghere nche na ngwa ndị ọzọ na-ebe nrụọrụ weebụsaịt ndị ọzọ na Paxful jikọtara;
Mmepụta nnyocha maọbụ akụkọ nnyocha sitere na mkpesaga;
Nsogbu achọtara site na akpaghịaka ihe nchọcha ;
Nje ewepụtara ndị ọha na ngwanrọ ịntaneeti n'ime ụbọchị 30 nke ngosi ha;
Mmegide onye Nnọneti;
Njikere nkụnye eji isi mee ndị ọbịa na-enweghị ihe akọwapụtara, pụtara ìhè;
Onwe-XSS, nke gụnyere ụgwọ ọbụla akwụrụ ụgwọ nke onye ahụ metụtara;
Ọ bụrụ na ị na-achọ ozi ndị ọzọ gbasara Iwu a, i nwere ike ịkpọtụrụ anyị site n'iziga [email protected].